आज आईतबार पूर्वबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकमा के छापियो ?
ब्लाष्ट : आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा “कोशी टप्पुमा भेटियो प्राणघातक एन्थ्रेक्सको जीवाणु” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । कोशीटप्पुमा वन्यजन्तु आरक्षको चरनक्षेत्रमा मरेका चौपायमा प्राणघातक रोग एन्थ्रेक्सको जीवाणु फेला परेको छ । आरक्षको घाँसे मैदानमा मरेका चौपायको रगतको नमूना परिक्षणका क्रममा एन्थ्रेक्सको जीवाणु फेला परेको हो । पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगरका डा. सञ्जयकुमार यादवले आरक्षक्षेत्रमा मरेका चौपायको रगतको नमूना परिक्षणका क्रममा स्वाइल वर्न डिजिज एन्थ्रेक्सको जीवाणु फेला परेको पुष्टि गरेका हुन् । बराहक्षेत्र नगरपालिका वडानम्बर ९ को आरक्षको संरक्षित क्षेत्रमा बिहीबार एकसाथ ४४ वटा चौपाया मरेका थिए । मरेका चौपायाको लक्षणका आधारमा सो क्षेत्रमा खटिएको पशु चिकित्सकको टोलीले एन्थ्रेक्सको आशंकामा पशुहरुको पोष्टमार्टम नगरी खाल्डो खनी पुरेको थियो ।
औजार : आजको औजार दैनिकमा “लोकसेवा आयोगले संवैधानिक रुपमा काम गरेको छः मन्त्री पण्डित”शीर्षकको समाचार छापिएको छ । नेपाल सरकारका संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले संविधान र वर्तमान कानुन अनुसार नै संवैधानिक रुपमा काम गरेको बताए । शनिबार सुनसरीको इनरुवा ६ मधेशमा दलितहरुलाई नमुना बस्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डितले अहिले देखिएको समस्याको मुख्य कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग नबन्नु रहेको र त्यसलाई राजनीति गर्नेहरुले उचालेको बताए । लोकसेवा आयोगले लिएको परिक्षा नेपालको संविधान र वर्तमान कानुनअनुसार संवैधानिक रुपमा लिएको बताए । उनले मधेसाका ९ परिवारलाई दलित नमुना बस्ति हस्तान्तरण गरे । सबै नेपालीलाई बासको ग्यारेण्टी गर्ने संविधानमै व्यवस्था भएकाले कोही पनि छाना बाहिर खुल्ला आकाशमुनी बस्न नपर्ने मन्त्री पण्डितले बताए ।
कोशीपत्र : आजको कोशीपत्र दैनिकमा “प्रदेश १ मा प्राविधिक विश्वविद्यालयको तयारी” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । प्रदेश १ सरकारले प्रथम कम्युनिष्ट प्रद्यानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा मोरङमा सञ्चालनमा रहेको मनमोहन पोलिटेक्निककै भौतिक संरचना प्रयोग गर्नेगरी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेको छ । यससम्बन्धी कानुन निर्माण प्रयोजनको लागि सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रदेशसभामा टेबल गरेका छन् । हाल अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारसहित मनमोहन पोलिटेक्निक मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको हात्तीमुढामा सञ्चालनमा छ । त्यहाँ विभिन्न संकायमा प्राविधिक विषयमा पढाई हुन्छ । प्रदेश सरकारले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको साविकको संरचना व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित त्यसलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराई विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
उद्घोष : आजको उद्घोष दैनिकमा “नेपालकै खबर बुझ्न भारतीय सिम” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । मोरङको सीमावर्ती नाकाका नेपालीले भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाली सिमकार्डको टावर नआउने र आएपनि राम्रोसँग कुराकानी गर्न नपाईने भएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरुले भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गर्न भारतीय आधार कार्ड चाहिन्छ । तर नेपाली सिमको टावर नआउने भएपछि भारतीय आफन्तको नाममा भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीका विभिन्न सिमकार्ड प्रयोग गरेर खबर आदानप्रदान गर्ने गरेका छन् । मोरङको जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ तारेगामा गोदामका बासिन्दा भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गर्छन ।